Slick Kick: Global Global Chiteshi Kushambadzira Platform | Martech Zone
China, December 19, 2013 Chitatu, December 18, 2013 Douglas Karr
Nepo yavo saiti ichizivisa chikuva chavo se Marketing Automation system, handina chokwadi chekuti ndinobvuma kupihwa ongororo yezvimiro zvaSlick Kick. Kushambadzira otomatiki kunowanzo sanganisira mushambadzi kuyerera uye kutungamira zvibodzwa zvekubatsira nechirongwa chekushambadzira chiri mukati… icho Slick Kick chinoita senge hachitsigire. Asi ini ndichavapupurira yakawanda-chiteshi kushambadzira kugona sezvaunoona kubva pane zvakanyorwa pazasi pevhidhiyo… wow! Iyi chikuva yatove mitauro yakawanda uye yakagadzirira kuenda. Ivo vakatosheedzera yemahara account yehupenyu kune vatengi vane pasi pezviuru zviviri zvekutaurirana mune yavo dhatabhesi.
Kana mapuratifomu achitaura nezvekuve All-in-One, maziso angu anowanzo tarisa pamusoro… asi Slick Kick ine zvese zvidzitiro zvakasunganidzwa mupuratifomu yayo:
Email Marketing - email kushambadzira mhinduro ine rondedzero yematemplate kwaunogona kutumira, kuteedzera uye kubata.
Fax nhepfenyuro - hongu, zvichiri kushanda uye dzimwe nguva zviri nyore kuwana nhamba yefakisi kushambadzira zvinhu zvako pane email kero.
SMS Marketing - kutumira mameseji kunoenderera kuve kuve kwepasirese uye kunoshanda, kuchipa mamwe emitengo yakanyanya kuregererwa pane zvinopihwa zvechero ipi svikiro.
Form Builder inokubatsira iwe kutora ruzivo rwunodiwa kuti uvake iyo Opt In runyorwa. Nyore gadzira fomu anovaka kuti utore data zvichienderana neyako tsika zvido.
Mapeji anomhara - batsira bhizinesi rako kuti rikure uye riwane kuratidzwa kupfuura yako saiti imwechete
Autoresponder - simbisa hukama hwako nevatengi vako uye tarisiro pamwe nekukura kwako email kushambadzira mushandirapamwe uye mari.
Ongororo yepamhepo - gadzira mafomu, sarudzo uye ongororo kuti uwane ungwaru hwakawanda tarisiro yako nevatengi.
Nhepfenyuro Yezwi - yeuchidza vatengi vako kuburikidza nezwi kutepfenyura automated sevhisheni maererano yavo inotevera kubhadhara, kugadzwa, kugadzirisa uye nezvimwe.
Event Management - kubata chiitiko hakuna kumbobvira chakareruka nakare kose.
Bata manejimendi - gadzirisa vese vaunofambidzana navo munzvimbo imwechete uye sangana neZoho, Salesforce kana Microsoft Dynamics.
Twitter Campaign - Enda Zvemagariro, Enda Global uye Enda Viral.
Facebook Campaign - Network nevatengi vako uye tarisiro.
Handina chokwadi kuti vanhu varipi, asi ndikapihwa zvimwe zveChirungu chakatyoka pane saiti ini ndinogona kungofungidzira kuti vari kumwe kunhu kune Chirungu mutauro wechipiri. Sezvo zvichitaridzika bhurogu yavo ichangotanga muna Mbudzi 1st, 2013 - Ndiri kufungidzira kuti pachine rimwe basa rekuita… asi rinotaridzika chaizvo kuvimbisa.
Ini ndinoda chinetso icho aya mapuratifomu ari kuisa pamberi peyakagadzwa ekushambadzira mapuratifomu. Nepo budiriro yakawana nyore uye tekinoroji yave yakachipa, mapuratifomu ekushambadzira haana kugadzirisa mitengo yavo pamwe nemaitiro. Kutanga kutsva senge uku kunogona kuwana pekutanga uye kuunza mitengo pasi muindasitiri, zvichiita kushambadzira kwakawanda-chiteshi kunowanikwa kune chero saizi bhizinesi.
Tags: Microsoft Dynamicssalesforcekutsvedza kukandaZoho
Chipo Chinozivikanwa Kwazvo Ino Gore reMireniyamu? Zano: Haisi iyo XBox Imwe